कोरोना नियन्त्रणमा ओली सरकार अझै गम्भिर छैन ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना नियन्त्रणमा ओली सरकार अझै गम्भिर छैन ?
कोरोना नियन्त्रणमा ओली सरकार अझै गम्भिर छैन ?
काठमाडौं । गत वर्ष सवारीसाधनमा साढे पाँच अर्ब खर्च गरेको सरकारले यस वर्ष सवा ६ अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर, कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचारका लागि भेन्टिलेटर किन्न भने कुनै चासो देखाएको छैन । त्यसका लागि दाताहरूसँग हात थाप्ने काम गरिरहेको छ ।
सात महिनामा विभिन्न अस्पतालमा ८० भेन्टिलेटर थपिएका छन् । तर, ती सरकारले किनेका होइनन्, सबै दाताले दिएका हुन् ।
संक्रमितको उपचारका लागि एक सय २० आइसियू बेड थप्ने घोषणासमेत सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘भेन्टिलेटर किनिएको छैन, प्रक्रिया पनि छैन, यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी आएको छैन ।’
प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले एक वाक्य मात्र प्रतिक्रिया दिए, ‘भेन्टिलेटर किनेको विषय मेरो जानकारीमा छैन ।’
मन्त्रालयका अनुसार टु दी फाउन्डेसनले ३०, निक साइमन फाउन्डेसनले २४, चौधरी फाउन्डेसनले आठ, सानोपाइला संस्थाले ६ र वान हार्टले दुई भेन्टिलेटर सहयोग गरेका छन् ।
त्यस्तै, भारतले नेपाली सेनालाई १० भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका अस्पतालमा एक हजार आठ सय आठ आइसियू र एक हजार ७० भेन्टिलेटर छन् ।
तीमध्ये कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि चार सय ५० आइसियू र एक सय ६४ भेन्टिलेटर छुट्याइएको छ । प्रदेश १ मा ३४, प्रदेश २ मा १७, बागमतीमा ५३, गण्डकीमा १६, प्रदेश ५ मा २८, कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा ६ भेन्टिलेटर छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश १ मा एक सय दश, प्रदेश २ मा ४६, वागमतीमा एक सय ७०, गण्डकीमा १५, प्रदेश ५ मा ७७, कर्णालीमा १७ र सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा १५ आइसियू बेड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबीचमा सरकारले पाटन अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल, आयुर्वेद तालिम केन्द्र कीर्तिपुर, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २०–२० गरेर एक सय २० आइसियू बेड थप्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसका लागि प्रतिअस्पताल १२ करोड ५० लाखका दरले रकम निकासा गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।
तर, टेकु अस्पतालबाहेक अन्यत्र आइसियू थपिएका छैनन् । वीर अस्पतालले आइसियू खरिदको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छैन ।
पाटन अस्पतालले चलाखी गर्दै पुरानै बेडलाई व्यवस्थापन गरी २१ वटा आइसियू बेड कोरोना संक्रमितका लागि तयार गरेको छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा। विष्णु शर्माले सरकारले भनेअनुसार नै आइसियू बेड तयार भएको दाबी गरे ।
अन्य अस्पतालले पनि नयाँ उपकरण ल्याएर सेटअप गरेको जानकारी नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।